Daldala siyaasaa fi shira sichi Oromoorratti xaxamuuf deemu! Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDaldala siyaasaa fi shira sichi Oromoorratti xaxamuuf deemu!
#Daldala siyaasaa fi shira sichi Oromoorratti xaxamuuf deemu!
Via Caalaa Hayiluu Abaataa, March 1, 2019
HaSuuran gaditti argitan kuni yommuu waraanni Mootummaa EPRDF-Abiy Ahmadin durfamu kan sakattaa WBOf #Baaletti bobbahe dirmannaa bosona gubataa jiru dhaamsuf akka waan godhametti agarsiisudha.
Akka odeeffannoon naannoo sanii bahe ibsutti garuu kan abiddaa san qabsiise iyyuu isaanuma waraana mootummaa EPRDF dha.
Hubadhaa waggoottan 28n darbaniifi ammallee kan bosona Oromiyaatti abidda qabsiisaa ture waraana mootummaa wayyaaneeTPLF/EPRDF! Ammas isaanumatu uumama daheeffatee gochaa jira.
Haa tahu malee jala bultii daldala siyaasaf oolfachuuf akka waan waraanni EPRDF qabeenya Oromoof yaaduu fakkeeffachuuf achi ergan.
Booddee Miidiyaa qabeenyi Oromoo alattis tahee Oromiyaattti itti dhangala’ee ijaarame irratti bahuun ” ‘#RIB waraana keenya, kunooti quuqama uummataa fi qabeenya uumamaa keenyaa kan qabu dha.” jechuu dhaan itti fakkeeffamee siyaasa irraa shamatachuuf deemu.
Akkuma gantoonni fi warri dantaa dhuunfaa tikfachaa turaniifi ammas jiran WBO balaaleffachaa turan, ”WBOn waraana Bilisummaa Oromoo miti; kunooti ’RIB’ caasaa isaa jijjiirratee loogummaa fi aantummaa uummataaf dhaabbachaa jira. Kanaafuu ’RIB’ waraana keenya; WBOn ’ shiftaa’ dha ” jechuun olola haaraa banuuf kurfeeffachaa jiru.
Waan hundaafuu shira kana keessaa Waaqni Oromoo waan harka hin qabneef itti hin milkaawan!!